Karka cagaaran (ama Shahadada cagaaran) Waa kaar cadeenaayo in aad ku safri kartid dhaman wadanka talyaniga. Laga bilaabo 6 da agoosto waxa qasab ah xita
120 Visite totali, 5 visite odierne
Soo dejiso PDF Hirgalinta talaalka cudurka faafa ee Covid-19 laga bilaabo 27ka disheembar waxa midowga yurub(EU) laga hirgaliyay talalka cudurka Covid-19 Dadka la talaalayo waxa
Laga bilaabo 03 juun dhaman gobolada waxa la furaya talalka ayadoon ku xirneen da’a aad jirto, waxad hoos ka fiirsataa gobolada iyo mesha laga balansanayo:
Tambooniga fudud, bilaash, uma baahnid in aad balansato ama warqad dhaqtar
Tambooniga fudud, bilaash, uma baahnid in aad balansato ama warqad dhaqtar Hey ada bisha cas ee Talyaaniga ayaa waxey ka hirgalisay Roma iyo Milano baarista
Shuruuc cusub(Decreto): Kala sarka goobaha
La qoray 14/06/2021 × Rimuovi avviso EERIYADA OO LA XAKAMEEYO Qoraalkaan waxa uu ka turjumayaa dhaman nuucyada lo qeybiyay Talyaniga (Qeybta gaduudan, Aranjaha, Jaalaha iyo
85 Visite totali, 3 visite odierne
Sharciga 3da disheembar iyo sharicga Kirismaska
Laga bilabo 21/12 ilaa 6/01 Wa mamnuuc nuc is lagaso baxo hoyga sacada 22 ilaa 5 01/01 Wa mamnuuc nuc is lagaso baxo hoyga sacada
58 Visite totali, 3 visite odierne
Shuruuc cusub(DPCM): Kala sarka goobaha
EERIYADA JALAHA AH ISKU SOCODKA MA IN AN SABABEYAA? MA QASABAA IN AAN WARQAD WATO?Laga bilabo 5ta ilaa 22 fiiski looma bahno warqad. Laga bilabi
57 Visite totali, 3 visite odierne
Itsicmaalka Maskeraha waa Qasab
Sharciga so baxay 7di bosha oktoobar waxa uu qasab ka dhigayaa in qof walba iu wato maskeraha mar walba. Wana qasab in aad xirataa mar
Aan ugu noqono iskula si amaan ah
Ugu danbeynti shandadiba dib loqaatay. Sanadkaan Boogaagta iyo qalimanta waxanoo dheer waxyabo kale oo eey tahay in aan la qabsano. Waa kuwan waxyabaha eey dowlada
91 Visite totali, 3 visite odierne
This page is also available in: Italiano (Italian) English (English) Français (French) Shqiptare (Albaaniyaan) العربية (Arabic) Español (Spanish) বাংলা (Bengali) 简体中文 (Chinese (Simplified)) Punjabi (Punjabi) Русский (Russian) اردو (Urdu) አማርኛ (Amxaar) Tigrinya (Tigrinya) Wolof (Wolof)